Lahatsoratra nosoratan'i Jenn Lisak Golding
Manangana sa Mividy? Famahana olana ara-barotra amin'ny rindrambaiko mety
Zoma, Aogositra 14, 2020 Zoma, Aogositra 14, 2020 Jenn Lisak Golding
Ny olana eo amin'ny orinasa na ny tanjona kendrenao izay manasongadina anao tato ho ato? Ny vintana no vahaolana miankina amin'ny teknolojia. Arakaraka ny fitakiana ny fotoananao, ny tetibola ary ny fifandraisan'ny orinasa, ny hany maha-irery anao hijanona eo alohan'ireo mpifaninana nefa tsy ho very ny sainao dia amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy. Ny fiovana amin'ny fitakiana fitakiana fihetsika ataon'ny mpividy Fantatrao sahady fa ny automatisation dia tsy misy ilana azy amin'ny resaka efficiencies: vitsy ny lesoka, ny vidiny, ny tara ary ny lahasa atao amin'ny tanana. Zava-dehibe ihany koa, izany no antenain'ny mpanjifa ankehitriny.
TinEye: Fikarohana sary miverina
Saturday, May 16, 2020 Sabotsy, Janoary 2, 2021 Jenn Lisak Golding
Satria mihamaro ny bilaogy sy tranokala navoaka isan'andro, ny olana iray mahazatra dia ny fangalarana sary izay novidinao na noforoninao hampiasainao manokana na ho matihanina. TinEye, motera fikarohana sary miverimberina, manome ny mpampiasa fahafaha-mikaroka url manokana momba ny sary, izay ahitanao hoe impiry no hita ireo sary ireo tamin'ny tranonkala sy ny toerana nampiasana azy ireo. Raha nividy sary stock ianao avy amin'ny loharano toa anay
Ny toro-làlana momba ny varotra mailaka amin'ny fialan-tsasatra farany Infographic
Alarobia, Desambra 7, 2016 Alakamisy, Septambra 24, 2020 Jenn Lisak Golding
'Io no vanim-potoana hanaovana marketing amin'ny fialantsasatra, ary ny mpanohana ny lozisialy fanamarinana ny mailaka NeverBounce dia namorona torolàlana momba ny varotra mailaka fialantsasatra farany ho an'ny fahafinaretanao mijery. Ny angon-drakitry ny National Retail Federasiona dia manohy mampiseho fa hiakatra ny fandaniana amin'ity taona ity, indrindra amin'ny Internet ary atosiky ny ezaka nomerika. Ny marketing amin'ny mailaka dia manana ny anjarany indrindra, ary ny mpivarotra dia mila mijanona eo ambonin'ny fitazonana ny lisitry ny madio sy vaovao mba hiarovana ny lazany sy ny fahaizany mandefa. Ny sasany
Alahady Oktobra 23, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Jenn Lisak Golding
Valiny fohy? Yep. Farafaharatsiny amin'ny hevitry ny nentin-drazana, ary amin'ny "nentim-paharazana" dia midika hoe mitaky ny mombamomba ny mpitsidika alohan'ny nanomezanao lanja, na ny fampiasana votoaty tsy misy dikany ho famporisihana anao. Andao haverina amin'ny toerany io kamio io: amin'ny asantsika manampy ny mpanjifa hampitombo ny fiovam-pon'izy ireo an-tserasera, dia nahatsikaritra ny fidinan'ireo mpitsidika an-tranonkala manan-danja sy feno izay nameno ny endrika firaka nentin-drazana. Misy antony matoa izany. Miova ny fihetsiky ny mpividy, indrindra satria ny haitao, ny fampahalalana